ဖူးနုသစ်: ကံဆိုးခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ အစဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကံဆိုးခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ အစဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကံကောင်းချင်တော့ တောသားတစ်ယောက်ဟာ လေယာဉ်ပျံ စီးခွင့် ကြုံလာပါတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ သူစီးလာတဲ့ လေယာဉ်ပျံက ပျက်ကျပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ သူ့အတွက် လေထီးပါလာပါတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ လေထီးက မပွင့်ပါဘူး။
ကံကောင်းချင်တော့ မြေကြီးပေါ်မှာ ကောက်ရိုးပုံကြီး အကြီးကြီး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ ကောက်ရိုးပုံကြီးရဲ့ အလယ်မှာ သံချွန်ကြီး တစ်ချောင်း ထောင်နေပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ သူကျတဲ့ အချိန်မှာ သံချွန်နဲ့ လွဲသွားပါတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ ကောက်ရိုးပုံနဲ့ပါ လွဲသွားပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးပြီး မှတ်မိနေတဲ့ ကာတွန်းဆရာ ငွေကြည်ရဲ့ဟာသ တစ်ခုပါ။ ကံဆိုးတယ် ကံကောင်းတယ် ဆိုတာတွေ ပြောတာကြားရရင် အဲဒီဟာသကို သွားပြီး သတိရတတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ ကံကောင်းခြင်း ကံဆိုးခြင်းတွေဟာ အမြဲတမ်း ဒွန်တွဲပြီး ရှိနေတတ် ပါတယ်။ ကံဆိုတာ လူလုပ်သမျှလို့ ဆိုပေမယ့်လည်း လူတစ်ယောက် အတွက် အတိတ်ကံ၊ အခုကံ၊ လူ့ကံ၊ ဝကံ တွေရှိနေတယ် ဆိုတာတော့ ကျွန်တော့် အတွက် ငြင်းစရာ မရှိသေးပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ အတွက် ကံဆိုးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့်လည်း အဲဒီကံဆိုးခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ အစ ဖြစ်ရင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်ကပါ။ ကျွန်တော့် ဦးလေးတစ်ယောက် သင်္ဘောတက်ဖို့ စောင့်ရင်း စင်ကာပူက မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် အိမ်မှာ သောင်တင်နေ ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူနေတဲ့အိမ်မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံလိုက်ရပါတယ်။ ရန်ကုန်က နာမည် အတန်အသင့် ရှိတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီ အဆိုတော်ဟာ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာတာ မရလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်တော့ သူ အလုပ်မရဘဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာတာ မရဘဲ ပြန်သွားရတဲ့ အတွက် အဲဒီအချိန်ကတော့ သူ့ဘာသာ ကံဆိုးတယ်လို့ ထင်ရင် ထင်မိမှာပါ။ ဒါကတော့ ကာယကံရှင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူမှာ အလုပ် မရခဲ့တာက သူ့အတွက် ကံကောင်းခြင်းရဲ့ အစပါပဲ။ စင်ကာပူက ပြန်သွားပြီး မကြာခင်မှာ သူဟာ မြန်မာပြည်မှာ အအောင်မြင် အကျော်ကြားဆုံး အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ (မှန်းကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင်သလဲလို့။ :-) )
အဲဒီ ဦးလေး ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ နောက်ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ သင်္ဘောလိုက်နေတဲ့ အချိန်က ကြားခဲ့တဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသား တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ပါ။ အဲဒီ မြန်မာ သင်္ဘောသားဟာ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ သင်္ဘောပေါ်က ခုန်ဆင်းတဲ့ အတွက် ရဲဖမ်းတာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်က ခုန်ဆင်းတယ် ဆိုတာ ရေထဲ ခုန်ချတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိုးဂျော့ လုပ်ဖို့ အတွက် သင်္ဘောပေါ်ကနေ တရားမဝင် ကုန်းပေါ်ကို ဆင်းပြေးတာကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ရဲက မိသွားတဲ့ အတွက် ဖမ်းပြီးတော့ မြန်မာပြန် ပြန်ပို့ပါတယ်။ သူ့ကို အဲဒီနိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် လေဆိပ် အထိ လက်ထိပ်ခတ် ထားခဲ့ပြီး ဘန်ကောက် လေဆိပ် ရောက်မှ လက်ထိပ်ကို ဖြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ တရားမဝင် နေလို့ ရဲ အဖမ်းခံရတာနဲ့တင် အဖြစ်က အတော် ဆိုးနေခဲ့ပါပြီ။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး အခေါ်ခံရတာကတော့ တော်တော်ကို ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာက အဆိုးဘက်ကိုချည်း ဦးတည်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်လို့ အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်ပြီး တစ်ချိန်မှာတော့ သူဟာ စူပါတန်းဝင် ရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ (အိမ်း.. ဘယ်သူများ ဖြစ်မလဲကွဲ့။ :D )
အောင်မြင် ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသား အဆိုတော်ဖြစ်လာတာ စန်းရှိမှ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံဆိုးတယ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အခြေအနေကနေ ကြိုးစားလို့ ထိပ်ဆုံး ရောက်ခဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ်က စင်ကာပူမှာ တတိယအကြိမ်မြောက် စာပေဟောပြောပွဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူ ပေါ်လီတက်ခနစ်ရဲ့ ကွန်ဗန်းရှင်း စင်တာ ခန်းမကြီးထဲကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်အိမ်တည်း အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကျောင်းဆင်းပွဲကို ဧည့်သည်အနေနဲ့ လိုက်သွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီပွဲမှာ အထူး ဧည့်သည့်တော် အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူက အိုဆင်းမ် (Osim) ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ရွန်ဆင်းပါ။ အိုဆင်းမ်ဆိုတာ အနှိပ်ကုလားထိုင်တွေ၊ ဝိတ်ချတဲ့ ကိရိယာတွေ ရောင်းပြီး စင်ကာပူမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုပါ။ ရွန်ဆင်းဟာ အဲဒီပွဲမှာ သူ့ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်ပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရွန်ဆင်းဟာ မပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ သူပါ။ သူ အထက်တန်း အောင်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က သူဟာ စင်ကာပူ ရေတပ်မှာ တက်ခနစ်ရှင် အဖြစ် ဝင်ဖို့ စဉ်းစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ စစ်တပ်ကို အမြဲတမ်း စစ်သားအဖြစ် ဝင်မယ်လို့ လက်မှတ်ထိုးရင် ဒေါ်လာ သောင်းကျော်တဲ့ ဘောနပ်စ် ရတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ လစာနဲ့ တခြား အခွင့်အရေးတွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှစ်နှစ် ဘွန်း ထိုးရပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူပြန် စဉ်းစားဖြစ်တာက စစ်တပ်ကို ဝင်မယ် ဆိုရင် လောလောဆယ် အခွင့်အရေး ကောင်းတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရှစ်နှစ်ပြည့်လို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုရင် သူ့ အသက်က ၃၀ ဝန်းကျင် လောက် ရှိနေပြီ။ အဲဒီအချိန် ရောက်မှ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မတွေးတတ်ဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူစစ်တပ်ထဲ ဝင်မယ် အကြံကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ သူဟာ စင်ကာပူ ပေါ်လီမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ ကြံပြီး ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အမှတ်က သိပ်မကောင်းတာမို့ စင်ကာပူ ပေါ်လီက သူ့ကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းဝင်ခွင့် မရတဲ့ အတွက် သူဟာ တခြား အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အလုပ်ထဲမှာ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမား အလုပ်ကနေ စပြီး အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်၊ စွယ်စုံကျမ်း အရောင်းသမား အထိ အစုံပါပါတယ်။ နောက်ငါးနှစ် အကြာမှာတော့ သူဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ကိုယ်ပိုင် ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီ ကုမ္ပဏီဟာ ၅ နှစ်ကျော် အကြာမှာတော့ စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့ ကြုံပြီး ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ ပျက်ပေမယ့်လည်း သူဟာ စိတ်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကို ပြန်ထောင်ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အိုဆင်း ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ ကျန်းမာရေး ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စင်ကာပူမှာ အတော်ကို အောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည် နေနိုင်ပါပြီ။ ရွန်ဆင်းကတော့ တစ်ချိန်တုန်းက သူ့ကို လက်မခံခဲ့တဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းဆင်းပွဲမှာ အထူး ဧည့်သည်တော် အဖြစ် တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ အတွက် သူ့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာတဲ့ အဆိုတော်သာ အလုပ်ရသွားခဲ့ရင် မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီး အဆိုတော် တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို လက်လွတ်ခဲ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ သင်္ဘောပေါ်က ခုန်ချခဲ့တဲ့ မြန်မာ သင်္ဘောသားလည်း အဖမ်း မခံရခဲ့ရင် နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာမှာပါ။ အိုဆင်းရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ဟာလည်း စင်ကာပူ ပေါ်လီမှာသာ ကျောင်းဝင်ခွင့် ရခဲ့ရင် သူ့ရဲ့ ဘဝဟာ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူလို ငါလို အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်နေမှာပါ။ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အတွက် ဘဝဆုံး သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက် ကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရဖို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကံဆိုးခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ အစလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းကို ရလာတဲ့ အချိန်မှာ လက်လွတ်မခံဘဲ ယူတတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
Labels: စင်ကာပူ, အက်ဆေး
ခုေန အလုပ္မရဘဲ ျပန္သြားရလည္း အခ်ိဳမႈန္႔မပါတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးေရာင္းၿပီး ႀကီးပြားရဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္။
နာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္က မ်ိဳးေက်ာ့ၿမိဳင္ ၿဖစ္ပါတယ္..
မွန္လားဟင္? မင္းသားေတာ့ မသိဘူး
No. He is more famous than Myo Kyawt Myaing. :D
ၿမန္မာၿပည္က ေရႊဘံုသားလမ္းဖက္ေရာက္ေတာ့ လမ္းေဘးေစ်းသည္
ေလးေတြကိုေတြ႔ေတာ့ အိမ္ကလူကေၿပာတယ္ လြန္ခဲ့တဲ.၆ႏွစ္ေလာက္ကတာ SG ကိုလာဖို႔ မစဥ္းစားခဲ့ရင္ အခုေလာက္ဆို သူတို႔လို လမ္းေဘးမွာေစ်းေရာင္းေနရမွာတဲ့။
အဲဒါ Sg ကိုလာမိတာကံေကာင္လား။
ဘယ္သူပါလိမ့္ .. သိခ်င္တယ္ .. (စပ္စုတာ :D)
Is singer name Zaw win Htut ?
မေျဖေတာ့ပါဘူးေလ။ ထင္ခ်င္သလိုသာ ထင္ၾကပါေတာ့။ ေတာ္ၾကာ နာမည္ဖ်က္တယ္ ဆိုျပီး ျပသနာလာရွာေနရင္ ဒုကၡ။ :D
ေဇာ္ဝင္းထြတ္က ဂ်ပန္ကေနျပန္လာတာပါ။ဂ်ပန္မွာ မလုပ္ႏိုင္လို႔ျပန္လာခဲ့တာလို႔ ေဒါက္တာမတင္ဝင္းေရးတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာေတြ႕ဖူးတယ္။
ကိုZT...ပေဟဠိအေျဖညိႇလုပ္ေနေသးတယ္...႐ြာမွာပဲေနရင္ သူမ်ားေတြလို ဂြင္ေကာင္းမိႏိူင္တယ္ထင္သလို တခါတခါေတာ့လည္း ဒီေရာက္လာတာ ကံေကာင္းတယ္ ထင္ခ်င္ထင္ေနေတာ့တာ..... ထားတတ္တဲ့စိတ္လည္း လိုေသးတယ္ :)
အင္း ေကာင္း၏။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လာဦးမွာပါ။
ေလးျဖဴ လား၊ အာဇာနည္လား
အေရးထဲ မွားျပီးရိုက္လိုက္ေသးတယ္။ :D
ေျပာတုန္းက ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ဆုိတာပဲ....။ ဒါေပမယ့္ သူက ဆုိၿပီးမွ ထြက္လာတာ...။
အေခြေတြ ေပါက္ၿပီလုိ႔ သူ႔ကိုေျပာမွ သူလဲ အလုပ္မရေသးတ့ဲ အခ်ိန္နဲ႔ တုိးေတာ့ ျပန္သြားတာတ့ဲ...
မေမျငိမ္းရဲ႕ ျပတုိက္ထဲကေန႔ ျပတုိက္ထဲက ည လား.... အသံသစ္ျပတုိက္ထဲကလား မသိဘူး ဖတ္ဖူးတယ္ ထင္တယ္။ ဝါးတားတား ျဖစ္ေနၿပီ။
ဒတ်ချ်တစ်ယောက်နဲ့ ညနေစာ စကားဝိုင်း